Abantu bahlala becinga ngale mibuzo xa bethenga isofa entsha yendlu yakho, sesiphi isitayile esinomtsalane ngakumbi, zeziphi izinto ezihlala ixesha elide, yesikhumba okanye yelaphu isofa yeyiphi engcono? Ngokwenyani, zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe ukuba ingaba ibhajethi, intuthuzelo, isitayile, njl, emva kwako konke, lelinye lawona macandelo abalulekileyo ebomini bakho. Ngokwempahla yesikhumba vs ilaphu, iya kuxhomekeka kwindlela ophila ngayo kunye nento ozoyiphila. Yiyo loo nto, sidwelise la manqaku angezantsi ekubhekiseleni ekuthengeni isofa efanelekileyo yendlu yakho.
Yintoni omele uyiqwalasele xa uthenga ulusu kunye nesofa yelaphu
Xa kusiziwa kwintuthuzelo kuthotywa ngakumbi ngokubhekisele kwiimvakalelo zobuqu. Ke into oyenzayo kuphela kukuzibuza, yeyiphi evakalelwa ngcono emzimbeni wakho?
Imvakalelo eqhelekileyo yeyokuba ilaphu lihle ngakumbi kunesikhumba cuz kuba lithambile, Eziphawuleka ngakumbi, kunye nokuphendula okungaphantsi kobushushu kwiimeko zegumbi. Kodwa kuxhomekeke kwimpahla yelaphu kunye nenkqubo yenkxaso ngokunjalo. Nje, iisofa zelaphu ziyaphefumla kuneesofa zesikhumba. Nokuba uhlala ixesha elide, iimpundu zakho zishushu kancinci, kufumile kwaye kuxinene, eyenza abantu bazive bekhululekile kwaye kunciphise ukucaphuka. Nangona kunjalo, Inye into ekufuneka ikhathalelwe, amanye amalaphu axabiso eliphantsi aya kukhululeka kwaye enze ukudibanisa kwiimakushi.
Ngokubhekiselele kwisofa yesikhumba, ihlala iphenjelelwa yimozulu. Ebusika, isofa yesikhumba inokubanda kakhulu ukubamba okanye indawo, kodwa okoko nje uthatha ingubo kuyo iya kufudumala ukusondela kubushushu bomzimba womntu. Ehlotyeni, Nokuba awunayo imo yomoya efakayo, isofa yesikhumba iyaphola kunelaphu elibangela ukubila kwaye unamathele kulusu. Ngokuqinisekileyo, sicebisa ukufaka imeko yokulawula imozulu, ezisa intuthuzelo ngakumbi kwimozulu eshushu.
Kwimpikiswano yeendleko zesikhumba vs.. ilaphu iisofa, ukuba ezi zimbini zikwindlela enye, yenziwe ngesakhelo esifanayo somgangatho, ulusu lubiza kakhulu ngokubanzi.
Ndikhangele isikhumba kunye nelofa esofeni kwiWayfair, Iziphumo zangaphambili zibonisa umohluko wazo. Isikhumba siphezulu kakhulu kunelaphu. Kodwa, Kukwakho namalaphu obutofotofo enziwe ngabaqulunqi abadumileyo abagqitha kwiindleko zezi zikhuko zesikhumba. Kukwakho nezinye iisofa zesikhumba ezikumgangatho ophantsi ezingabizi kakhulu kunelaphu ukuba awuyithathi intuthuzelo nembonakalo. Ixabiso lihlala libonisa umgangatho wobomi besofa, ke alithandabuzeki elokuba ulusu luhlala ixesha elide kunelaphu ukuba alonakaliswanga kwisipaji.
Ke ngoko, eyokuqala ekufuneka uyiqwalasele ibhajethi, ke ukuhonjiswa kwendlu, ubume bosapho. Kuyonga ngakumbi ukukhetha isofa yelaphu enokuthi igcine iindleko zesiqingatha. Iisofa zesikhumba zilungele ngakumbi abantu abaneemeko ezifanelekileyo zemali okanye amagumbi okwamkela ukuze bathenge. Ngelixa i-sofas zelaphu zifaneleke ngakumbi kwiintsapho ezinobunzima nokuba ngaba izimbo ezininzi okanye amaxabiso aguquguqukayo.
Ilaphu kunye nesofa yesofa zombini zinendlela ebanzi yeepateni kunye nemibala onokuyikhetha, ekufuneka ihambelane negumbi lonke.
Nje, iisofa ezihlala zikhona zibonelela ngakumbi kunesikhumba ngenxa yeepateni zazo, imibala, iimilo, kunye neendlela zobugcisa. Ukuba ucinga ngokubeka isofa yelaphu xa uhlobisa indlu yakho akukho nto uyikhathaleleyo, cuz ungafumana nasiphi na isitayile kunye nombala wokudibana negumbi. Kuye kwaba lukhetho lokuqala kubantu abaninzi, emelwe ziindawo eziqhelekileyo ze-sofas yelaphu laseMelika eziluncedo kulwakhiwo lwazo oluqinileyo, izinto eziphucukileyo, uyilo lwenzululwazi, ubuchule obuhle kunye nentuthuzelo ebanzi.
Okuphikisanayo, zimbalwa izinto zokuhombisa zendlu ezikwazi ukutshatisa isofa ephezulu yesikhumba ekumgangatho ophezulu. Ukuba ayilifanelanga igumbi, Impembelelo ephucukileyo ingathunyelwa. Ngokuqinisekileyo ukuba ihambelana kakuhle inokubonisa ubuhle obukhethekileyo kwigumbi ekunzima ukuliphinda kwilaphu. Eyona nto ixhaphakileyo kwiSikhumba yindlela ye chesterfield exhaphake kakhulu ngokwesiko. Nangona kunjalo, njengomgaqo, iisofa zesikhumba zihlala zihamba ngakumbi kunezinye zazo. Ukuba ukhetha ukuba nembonakalo yangoku okanye yanamhlanje, ithande ukubonakala ilula kwaye isiphelo siphezulu ngakumbi kuninzi lweesofa.
Nokuba sisikhumba okanye ilaphu lesofa bonke babonelela ngobuhle kunye nobunkunkqele endlwini yakho, igumbi lakho lokulala, igumbi lakho lokutyela, okanye igumbi lakho lokuphumla. Yiyo loo nto, ijonge kukhetho lomntu. Ngaba ufuna ukuba isofa yakho ibe yeyona nto iphambili yoyilo kwigumbi lakho lokuhlala? Sisiphi isitayile somhombiso osithandayo, ukuvuna okanye okwangoku? Ngaba unethemba lokuba kunokuba lula kwindlu yakho? Yiyo yonke into esiza kuyithathela ingqalelo xa ukhetha iisofa.
Ngaphandle kwentuthuzelo, iindleko kunye nesimbo, Ulondolozo lunokuba yinto ephambili ukuthandabuza. Isikhumba kulula kakhulu ukusicoca kunye nexabiso elincinci, ngelixa ilaphu lifuna ukucocwa kwaye licocwe rhoqo. Isofa yesikhumba inokuhlala amashumi eminyaka ukuba ikhathalelwe ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, Ngelixa kufuneka ibekwe imo ngokungaguqukiyo ukunqanda iintanda kunye nokwahlukana.
Ngenxa yento engangeni manzi, into oyenzayo kukumanzisa ngokupheleleyo itawuli emanzini acocekileyo, uyisongele kwaye usule umphezulu wesofa. Nangona kunjalo, ukuba kulondolozo lwexesha elide kufuna ioyile ekhethekileyo kunye nokuthambisa. Ukwengeza, nje ukuba isofa yesikhumba yonakele ngokwasemzimbeni, isiciko sangaphandle asinakutshintshwa, eyona inzima ukuyiphatha. Ngaphandle koko, ezinye izilwanyana ezifana nekati zisetyenziselwa ukuzinzisa isofa. Kwimeko yomonakalo, pakisha iiseti okanye uthenge izinto zokudlala ukuze ikati iphazamise. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iisofa zesikhumba kunzima ukuzilungisa kwaye imikrwelo kunzima ukuyilungisa, ke ukuba unabantwana okanye izilwanyana zasekhaya, ilaphu iisofa zilungele ngakumbi.
Ngokubhekisele kwilaphu, ilunge ngakumbi kwaye kulula ukuyigcina. Uninzi lweseti yesofa yelaphu inokususwa kwaye ihlanjwe. Ukuba ucinga ukuba kuyakhathaza ukujongana nale nto yokungcola ingcolileyo, ungayikhupha uyithumele kwindawo yokucoca eyomileyo. Ukuba ukhathazekile malunga nobushushu vele ubeke imethi xa kufika ihlobo kwaye uyitshintshe ngephedi eshushu ebusika. Nangona kunjalo, Izingqengqelo zamalaphu ziya kwipilisi kwaye zinxibe zibhitye ngokusetyenziswa rhoqo, ke ngoko ukukhetha isofa ekumgangatho ophezulu kunokunciphisa umngcipheko.
Isofa yelaphu ngokubanzi yenziwe ngesilika, satin, hemp, i-corduroy kunye nezinye izinto ezinxibayo. I-Per ineempawu zayo. Isilika kunye ne-satin yelaphu le-sofas zibonisa ubuhle kunye nokunethezeka, ukunika abantu imvakalelo entle. Nangona kunjalo, i-hemp kunye ne-corduroy sofas zijongeka zinzima kwaye zodidi, kwaye kubonakala ngathi yenza isitayile sendalo kwaye silula.
Ukukhetha izinto zeesofa zesikhumba kukhulu, naye. Izikhumba ezahlukileyo zivelisa iziphumo ezahlukileyo ngokupheleleyo. Iimpawu zeesofa zesikhumba zijolise kuyo, ukuthamba kwendalo, Ubulukhuni besikhumba senkomo, umphezulu obuthathaka, ukukhawuleza kombala ophezulu, luthambe elungileyo, ukungena komoya, kunye namandla aphezulu oomatshini. Okona kubalaseleyo ngamandla alo aphezulu okomelela kunye nokuqina okuqina okuphucula ixesha lokuphila kwesofa. Zihlala zahlulwe zaziindidi ezimbini, isikhumba esibhityileyo okanye esijiyileyo. Uyilo lwesofa encinci yesikhumba imele isitayile esilula nesikhanyayo.
Iisofa zesikhumba ezikumgangatho ophezulu zithambile ukuchukumiseka, ndikhululekile ukuhlala, kushushu ebusika kwaye kupholile ehlotyeni. Ngenxa yobume obungcono, ixabiso libiza kakhulu kunelaphu. Zininzi iintlobo zeesofa zelaphu ezinika abantu iimvakalelo ezahlukeneyo. IiSofa ezenziwe ngelaphu lesilika zihlala zidlulisela abantu imvakalelo efanelekileyo, kwaye iisofa ezenziwe nge-hemp zilula ngakumbi. Ukusuka kwindawo yokujonga izinto, iisofa zesikhumba zihlala ixesha elide.
Kukho inyani yokuba sasihlala singahoyi ukuba iisofa zesikhumba eneneni zi-hypoallergenic. Ukuba umntu une-allergies yokusingqongileyo, emva koko oku akunakunceda nokuba isofa ilunge kangakanani. Ngokungafaniyo nesofa yelaphu, iisofa zesikhumba zibamba iintsholongwane ezimbalwa zothuli, dander isilwanyana, kunye nezinye izifo, ezinokubangela ukungabikho komzimba. Ke, thelekisa nesofa yengubo ebonelelwe ngombhede ofudumeleyo we-allergen uneasy ukucoca isofa yesikhumba kubonakala ngathi lukhetho olungcono. Ngokuqinisekileyo, akunakwenzeka ukugcina isofa yelinen engenazinto zomzimba, kodwa iya kuba lixesha elininzi kwaye ithathe umzamo ongaphezulu kunesingqengqelo sesikhumba kwindlela ende
Nantsi eminye imibuzo eluncedo onokuzibuza yona xa uthenga ilaphu okanye isofa yesofa:
Ngaba unazo izilwanyana zasekhaya? Ngaba zizinto zakho ezifuywayo iintsana zakho? Ngokubanzi sicebisa amalaphu kubanini bezilwanyana kuba banokukrwela isikhumba esinexabiso kunye nokukhasa kwabo. Nangona kunjalo, ukuba ungumqeqeshi okrelekrele kwizilwanyana zasekhaya, ke zombini zilungile.
Ingaba unabo abantwana? Ngaba bathambekele kwiingozi zayo yonke imigca? Ngaba bahlala bedlala esofeni? Ukuba ewe ewe, ndithembe, isikhumba sinokukukhonza ixesha elide xa kuthelekiswa nelaphu. Ngelixa kungekho ndlela yakuphepha ubuzwilana babantwana, isicwangciso solawulo lomonakalo siyimfuneko.
Isofa yakho iya kuba liqabane lexesha elide elifuna ukubonakalisa isimbo sakho esiguqukayo kunye nokulawula iimfuno zakho zokuphumla. Nangona ukhetha ilaphu vs.. isofa yesikhumba (okanye ngokuchaseneyo) Isenokubonakala njengokhetho lobuhle, iya kuba nefuthe kubude beqhekeza ekhayeni lakho. Into elungileyo sinokukhetha okuninzi ezandleni.
Ujonga njani xa uthenga isofa kunye nelaphu lesofa
1. Jonga izinto zangaphandle ezifanele ukuqiniswa ngokwaneleyo. Qinisekisa ukuba akukho mibimbi ingafunekiyo kunye nezibaya ezichaphazela ukubonakala.
2. Umphezulu weglasi wesofa kufuneka ucabalele, kungekho magwegwe, iinzipho eziphumayo, okanye ukutya, ezokwenzakalisa abantu kunye neempahla ezikrazukileyo.
3. Ukuba uchukumisa isinyithi okanye isakhelo somthi, Ndisaziva ikona ekhoyo ethetha ukuba isiciko sombane kulula ukuba sinxitywe ngexesha elifutshane, ngakumbi kufutshane nendawo yokuhlala.
4. Qaphela ukuba iipateni zihambelana ngokufanelekileyo, kwaye imithungo esetyenziselwa ukuhombisa ilungelelaniswe ngokulinganayo.
5. Umqengqelo akufuneki unqunyanyiswe kumphambili wesihlalo. Unxibelelwano kufuneka lubemxinwa phakathi komqamelo, iingalo, ngasemva, kunye nesofa.
6. Jonga ukuba iindawo zokubamba iingalo kunye nemilenze yesofa zizinzile na, umphezulu womthi ugudile. Umqamelo kufuneka ube nenkxaso eyoneleyo kwaye uhambelane nesofa ngasemva.
7. Isofa yesikhumba ihlala ine-chromatic engabonakaliyo, nditsho namabala amancinci, ke jonga imibala yesikhumba ejikeleze yonke indawo.
Indwangu yokuhombisa kunye neendidi zesikhumba
Uninzi lwabathengi abanokungafundi iintlobo zelaphu lokuphanda kunye nofele olukuncedayo ekuthatheni ilaphu okanye isikhumba. Iindidi zelaphu lokuphakamisa nokuba ziziintsinga zendalo okanye iintsinga ezenziwe ngabantu. Nantsi intshayelelo emfutshane kwimicu yelaphu oya kuyifumana xa ujongene nezinto ezahlukeneyo zelaphu.
Iintsinga zendalo zizinto eziqhubekayo zomsonto ezivela kwizityalo okanye izilwanyana. Zidla ngokuthamba, intle ukuhombisa kwaye kumnandi, ukhululekile ukubamba. Zine iifayibha zendalo ezinje ngeempawu ezingezantsi.
Gcina ubushushu kunye nobushushu; Iyahlala, ubunzima kunamanye amalaphu; Umbimbi kunye nebala elinganyangekiyo; Nxiba umbala ngokulula, fade ukumelana; Antibacterial, uxhathisa ivumba
Umphezulu ugudile, ithambile kodwa ayimtyibilizi; Ulusu kunye nokhathalelo lweenwele ngenxa yealbumen yendalo yeselula; Idayi kwaye iprinta kakuhle; Ityhafiswe kukubila, ilanga, isepha; Umelana nomhlaba, umngundo, namanundu; Ufuna ukhathalelo olukhethekileyo, icocwa ngokomisa
Iyathuthuzela kwaye iyaphefumla; Iintsinga zendalo ezingenayo imichiza.; Hypoallergenic kwaye ayicaphukisi ulusu.; Ukuhlaziywa kunye nokubola kwezinto.; Ukuhlamba umatshini.; Iyakhawuleza ukuncipha kunye nemibimbi kakhulu.; Iintsinga zendalo ziyaguga ngokukhawuleza
Ifayibha yendalo enongcoliseko olusezantsi lokusingqongileyo; Umsebenzi onzima ukuvelisa; Ngokwendalo, ukugxotha izinambuzane; Ukufunxa ukufuma kakuhle ukuya kuthi ga 20% ngokobunzima bayo; Ukuphola okungaqhelekanga kunye nokutsha kwimozulu eshushu kunye nefumileyo; Hypoallergenic, ilungele ulusu olubuthathaka okanye uxabana nalo; Uchatshazelwe kukungunda nokubila; Kunzima ukususa ii-creases
Umntu wenza imicu
Ifayibha eyenziwe ngumntu yenziwa ngabantu ngokudityaniswa kwamachiza, ngokuchasene nemicu yendalo efunyanwa ngokuthe ngqo kwizinto eziphilayo. Ziquka i-nylon, ipholiyesta, acrylic, IVinyl polyolefin, njl. Nazi iinkalo zezi ntlobo zenziwe ngabantu.
Uxhathisa ukuzolula kunye nokuncipha; Iyahlanjwa okanye yomile; Unonophelo olulula njengoko luchasene nemibimbi, ukubuna.; Ukuxhathisa uninzi lweekhemikhali; Awuyi kubola okanye ukufunxa amanzi; Iingxaki ezi-static kunye neepilling; Amabala eoyile kunzima ukuwasusa; Ukungabikho kwendalo
Iveliswe ngokunyibilikisa iipellets zeplastiki, enokutsha kakhulu; Uqine High; Iyahlala, ukumelana namabala; Isambuku esihle kunye nesimbozo; Ubambe umbala wayo ; Iipropathi zokudibanisa ezihlwempuzekileyo, Kunzima ukupeyinta; Izinto ezibonakalayo zinokubonisa ukonakala
Elula, ithambile, kwaye kushushu, Isandla esifana noboya; Ngaba unokulinganisa ezinye iifayili, ezifana nekotoni; Idayi kwimibala eqaqambileyo; Ukunganyangeki komzimba; Uxhathisa amanundu, oyile, imichiza, ukukhanya kwelanga; Tsala ukufuma kude nomzimba kwaye kuyahlambeka; Ukuphathwa ziipilisi kunye neengxaki zokungonakali
Yomelele kodwa inobunzima obungaphantsi kwayo nayiphi na ifayibha esetyenziswa rhoqo; Uninzi lwezinto ezoluliweyo ; Ukufuma kufume kakhulu, ephefumlayo.; Kakhulu ukumelana lingonakali, ukungunda, kukungunda nokubaneka; Ukuhlamba lula, kwaye zichasene nokuchitheka kweoyile.; Ukuchaphazeleka kukukhanya kwelanga kunye, yellows kunye nobudala; Ukuchasana neoyile kunye neekhemikhali ezininzi; ukutshisa okuphantsi kunye nendawo yokunyibilika
Idayi ngokulula kwaye ivelisa imibala eqaqambileyo
Yaziswa ukuba ifane nesilika, uboya, okanye umqhaphu
Kuthambile, yomelele kwaye ayibizi
Akukho zingxaki ze-static okanye zepilling
Ihlala isetyenziswa kwimixube
Imibimbi ngokulula ngaphandle kokuba inyangiwe i-esp ihlanjiwe
Iyakwazi ukufunxa ukufuma, iioyile zomzimba, kunye namanzi
Izinto ezincedisayo zokuqhuba ngexesha elibandayo
Ukusebenza kakuhle okungangeni manzi
Ukudibanisa kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhombisa
Ithambile kwaye ijongeka intle
Nxiba ngokukhawuleza kunye nokusetyenziswa
Ukufunxa uthuli kakhulu
Isikhumba kunye nelaphu lesofa - umxube ogqibeleleyo waso nasiphi na isitayile
Ngaphandle kokunika iingcebiso ezininzi, Ndicinga ukuba omnye umntu uziva emadolw 'anzima ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi efanelekileyo yokuya kwesikhumba okanye kwilaphu. Apha siza kubonisa olunye uluvo olulungileyo lokuba nobabini egumbini lakho kwaye udibanise isikhumba esihle kunye nelaphu lesofa eliya kulungela ingaphakathi lakho ngendlela entle.
Zombini izikhumba kunye nesofa yelaphu exutywe nezinto zangaphakathi ze-rustic kunye neMeditera, Liqulathe ubutyebi obugudileyo nobugudileyo, imibala ethomalalisayo kunye nemvakalelo yokufudumala. Isofa yesikhumba luhlobo lwefanitshala yeklasikhi ebisoloko inxulunyaniswa nobunewunewu kunye neediliya. Izinto zokulungisa iimpahla, kwelinye icala, Idlulisela intuthuzelo efanayo, imfudumalo kunye nemvakalelo yasekhaya. Nje ukuba udibanise nezinto zangaphakathi ze-rustic, izinto ezenziwe ngofele kunye nelaphu kwisofa ziya kubonisa ukubonakala okubonakalayo okwamkela iindwendwe ukuba zityelele. Imithwalo ethambileyo kwiithoni ezixineneyo longezo olufanelekileyo kwisofa. Iipateni zeentyatyambo ezimbejembeje zesofa zikhupha enye into enomtsalane kumhombiso wangaphakathi. Khawufane ucinge ukuba uhleli ngasemlilweni kwaye wonwabele ukuqhekeka kweenkuni kunye nomdaniso wedangatye. Ngaba ngekhe kungamangalisi kwaye noxolo olukhulu lwangaphakathi?
Isikhumba kunye nelaphu lesofa, nangona ibiyinto eqhelekileyo yoyilo lwesiko, Sifumene indawo yabo efanelekileyo ngaphakathi ngaphakathi. Imigca ethe nkqo kunye ethe tye, imibala ehambelanayo kunye neyahlukileyo ibalaselisa uyilo olwahlukileyo lwala maxesha, Umbono oqhelekileyo wesofa yangoku. Iphalethi yombala ijolise kumnyama weklasikhi, mhlophe qwa, inavy Blue, okanye indibaniselwano yezi bhloko zombala, kunye nombala ompunga ongwevu. Grey ijongeka ngokulinganayo ngokudibeneyo kunye nomnyama okanye umhlophe. Umdibaniso wesikhumba kunye nelaphu unikezela intuthuzelo engaqhelekanga kunye nesitayile kodwa ayothusi kwaphela. Iisofa ezintle zecandelo okanye iisofa zekona yindawo yokuhlala yeendwendwe kunye nosapho, oludibanisa ngokulula izinto zangaphakathi zangaphakathi kunye nezincinci. Imiqamelo yokuhombisa ihlala inombala omnye osisiseko okanye imibala embalwa yombala omnye ngaphandle kweepateni zokuhombisa. Isikhumba kunye nelaphu lesofa kunye noyilo lwala maxesha kwenzelwe ukuba ibe yindawo ephambili egumbini kunye nesiqwenga sencoko. Ukuqwalaselwa kwemodyuli kubonelela ngokuguquguquka kokuhlengahlengisa izihlalo ngokweemfuno kunye nokukhetha kwakho.
Isofa yindawo ebalulekileyo kwigumbi lonke apho ususa khona uxinzelelo, Iimvakalelo ezidiniweyo nezingalunganga. Yindawo eyenzeka izinto ezinomdla nezifudumeleyo yonke imihla. Ndiyakholelwa ukuba kunzima ukukhetha isikhumba okanye isofa yelaphu kumawaka eemodeli. Nangona kunjalo, impendulo ayiqinisekanga ukuba yeyiphi engcono kwaye ixhomekeke kuwe nakwintsapho yakho. Logama nje ihlangabezana neemfuno zakho kunye nokuziqhelanisa nokuhonjiswa kwendlu, iya kuba yinto emnandi ukuyikhetha.
Iimpawu: Thenga isofa
Ixesha lokuposa: 2020-11-27